फलानो मन्त्रीको श्रीमतीद्धारा सरकारी गाडी दुरुपयोग – Janacharcha.com
» समाचार अंक: 1525
फलानो मन्त्रीको श्रीमतीद्धारा सरकारी गाडी दुरुपयोग
बुधवार विराटनगरमा उद्योग संगठन मोरङले दशैं तिहार शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम चल्ने क्रममा भिआइपीहरुको बाक्लै आवत जावत भईरहेको थियो । भिआईपीसँगसँगै उनका आसेपासे र नातेदार पनि आईरहेका थिए । त्यही क्रममा एक जना म्याडम विलासी सरकारी गाडीबाट उत्रनु भयो । उनका साथमा दुई जना नानीहरु समेत थिए । उनलाई देख्ना साथ केही व्यक्तिहरु फलानो मन्त्रीको श्रीमती भन्दै कानफुसी गर्न थाले र नजिक आउना साथ नमस्कार टक्राए । पक्कैपनि ति व्यक्तिहरु मन्त्रीकै लाइनको मान्छे हुनुपर्छ । र अर्कातिर विपक्षी पार्टिकाहरुले साइकलवाला मन्त्रीको श्रीमती भन्दै खिस्सी गर्दै थिए ।
उक्त गाडीको नं थियो बा १ झ ५८४७ । सो गाडीे संघ अन्तर्गत कुनै मन्त्रालय मताहत प्रयोग हुदै आएको भन्ने बुझ्नमा आएको छ । काठमाडौंमा प्रयोग हुदै आएको उक्त गाडी के प्रयोजनका लागी विराटनगर आयो ? र कुन अधिकारले फलानो मन्त्रीको श्रीमतीले त्यो गाडी प्रयोग गरिन् ? भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
सो दृश्य हेरिरहेका एक विपक्षी पार्टिका नेता भन्दै थिए “यो त हदै भयो । अब सरकारी गाडी भित्र पनि सिसिटिभी राख्ने बेला भएछ, नभए सरकारका गाडीहरु सबै मन्त्रीका श्रीमती र छोराछोरीले सक्ने रैछन् ”
सरकारी गाडीे दुरुपयोग भएको घटना, यो भने पहिलो होइन । यसअघि पनि यस्ता थुप्रै घटनाहरु बाहिर आएर जनप्रतिनिधि तथा उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरु बदनाम भईसकेका छन् । श्रीमान् वाहलवाली मन्त्री रहेका वेला शक्तिको आडमा आफन्तहरुले सरकारी गाडीको प्रयोग गर्नु यो लज्जास्पद विषय हो । सँगसँगै मन्त्रीको पनि इज्जत र नैतिकताको पनि सवाल हो । बेलैमा विचार पु-याएको राम्रो ।